Power Rangers Dino Thunder (2003)
Story Line : Power Rangers Dino Thunder is an American children's television series, the twelfth season of the Power Rangers franchise. As with all Power Rangers series, it was adapted fromaseries from the long-running Japanese Super Sentai franchise, in this case, the 27th entry, Bakuryū Sentai Abaranger. Dino Thunder was also the subtitle of the Korean dub of Abaranger in South Korea and hadasimilar/identical logo to the American version as well. The series is notable as it features the return of Jason David Frank toastarring role. A soccer player,acomputer expert,asinger, an artist andateacher join forces to help save the Earth from the scheming Mesogog,adinosaur villain who wishes to eradicate all human life.... Followed by Power Rangers S.P.D
Release On : 01/01/2003
View : 11881
ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ ကျွန်းပေါ်ကနေ Tommy Oliver တစ်ယောက် စွမ်းအားရှိတဲ့ဒိုင်နိုကျောက်မျက်တွေကို စုပြီး ကမ္ဘာကြီးကို သိမ်းပိုက်ချင်တဲ့ မီဆိုဂေါ့ ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဖြစ်တဲ့ TYRANNODRONES တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ လွတ်လာပါတယ်။
ဒိုင်နိုကျောက်မျက်တွေ ဆိုတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ဒိုင်နိုဆောတွေမျိုးသုဉ်းစဉ်က ကမ္ဘာပေါ်ကို ကျခဲ့တဲ့ ဥက္ကာခဲအပိုင်းအစတွေကနေ ဖြစ်လာတာပါ။
အိုလီဗာဆိုတာကတော့ ပထမဆုံးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ mighty morphin power rangers အဖွဲ့မှာ လူဆိုးအစိမ်းရောင်ရိန်းဂျားအနေနဲ့ပါခဲ့တယ် အဲ့ဒီနောက် သူ့ရဲ့လူဆိုးကျိန်စာပြယ်သွားပြီးနောက် ကောင်းတဲ့ရိန်းဂျားဖြစ်လာပြီး Mighty Morphin power rangersတွေနဲ့ အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိန်းဂျားစိမ်းရဲ့အစွမ်းတွေမရှိတော့တဲ့ နောက်မှာတော့ အိုလီဗာဟာ White Ranger ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Zeo Red ranger၊ နောက်ဆုံးတော့Turbo red ranger ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အိုလီဗာဟာ သူ့ရဲ့Turbo red ranger ကိုအခြားသူထံလွှဲပြောင်းပြီးနောက် ဒိုင်နိုကျောက်မျက်တွေ အကြောင်းကို ရှာဖွေလေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
အိုလီဗာတစ်ယောက် ထယ်ရာ၊ ထွေစီရာ၊ တိုင်ရွမ်နို ဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုကျောက်မျက်၃ခုကို တွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ မီဆိုဂေါ့ဟာ သူ့ရဲ့Tyrannodrones တွေကိုလွှတ်ပြီး အိုလီဗာဆီက အဲ့ဒီကျောက်မျက်တွေကို လုယူဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။
အိုလီဗာလည်း မီဆိုဂေါ့ မလုယူနိုင်အောင် အဲ့ဒါတွေကို တောထဲက လုံခြုံတဲ့ မြေအောက်တစ်နေရာမှာ ဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ အိုလီဗာဟာ Reefside ကျောင်းမှာ သိပ္ပံဆရာအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ အိုလီဗာတစ်ယောက် သူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့ကော်နာ၊ ကျွန်ပျူတာဂျပိုးအီသန် နဲ့ သီချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့ကီရာတို့ကို ပြတိုက်ဆီခေါ်သွားပါတယ်။
ပြတိုက်ရောက်တော့ အိုလီဗာဟာ ပြတိုက်ဆီသွားပြီး တပည့်၃ယောက်ကတော့ အဲ့အနားက တောထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားပါတယ်။ သွားရင်းနဲ့ တစ်နေရာရောက်တော့ မြေကျွံကျပြီး အိုလီဗာဝှက်ထားတဲ့ကျောက်မျက်၃ခုကို တစ်ယောက်တစ်ခုဆီ အမှတ်မထင်ရသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျောက်မျက်ရဲ့စွမ်းအင်တွေဟာ သူတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်ပြီး ကော်နာက အမြန်စွမ်းအား၊ အီသန်က သန်မာတဲ့စွမ်းအား၊ ကီရာက အားကောင်းတဲ့အသံစွမ်းအားရသွားပါတယ်။
အိုလီဗာဟာ ရှေ့လျှောက်ကြုံတွေ့ရမယ့် မီဆိုဂေါ့ရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် အဲ့ကျောက်မျက်တွေကို သူတို့ဆီကပြန်ယူပြီး အဲ့ကျောက်မျက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အသွင်ပြောင်း လက်ပတ်၃ခုကို သူတို့ဆီပေးလိုက်ပြီးနောက် သူတို့၃ယောက်ဟာ ဒိုင်နိုသန်ဒါရိန်းဂျားတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တစ်နေ့အိုလီဗာလည်း မီဆိုဂေါ့ရဲ့အဖမ်းခံရပြီးနောက် ဘရက်ခီယိုကျောက်မျက်နဲ့ အတူရုန်းထွက်လာနိုင်ပြီး အနက်ရောင်ရိန်းဂျားဖြစ်လာပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အိုလီဗာရဲ့မိတ်ဆွေ အန်တန်မာဆာဟာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်ပဲ သူ့ရဲ့သား ထွမ့်ဟာ အဆိပ်အတောက်တွေပါပြီး မကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ ကျောက်မျက်ကိုရရှိပြီး လူဆိုးရိန်းဂျားဖြူဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒီseriesမှာတော့ အရင်ကပါဝါရိန်းဂျားတွေအကြောင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Power Rangers Ninja Stormနဲ့လည်း crossover ဖြစ်ဦးမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ဒိုင်နိုသန်ဒါပါဝါရိန်းဂျားတွေ ကမ္ဘာကြီးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့မီဆိုဂေါ့ကို တားနိုင်ကြပါ့မလား....?
ပါဝါရိန်းဂျားတွေရဲ့ စက်ရုပ်တွေကို တီထွင်ပေးခဲ့တာဘယ်သူလဲ..?
အန်တန်မာဆာရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အကြီးကြီး ဆိုတာကရောဘာလဲ...?
ထွမ့်လည်း အိုလီဗာ အရင်ကဆိုးရာကနေ ပြန်ကောင်းလာသလို ပြန်ကောင်းလာမလား?
မီဆိုဂေါ့ဆိုတဲ့လူဆိုးတွေက ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကို Wild Digi Ani (WDA) မှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Episode 1 >>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Day of the Dino, Part I"
Episode2>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Day of the Dino, Part II"
Episode3>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Wave Goodbye"
Episode4>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Legacy of Power"
Episode5>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Back In Black"
Episode6>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Diva In Distress"
Episode7>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Game On"
Episode 8 >>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Golden Boy"
Episode9>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Beneath the Surface"
Episode 10 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Ocean Alert"
Episode 11 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "White Thunder, Part I"
Episode 12 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "White Thunder, Part II"
Episode 13 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "White Thunder, Part III"
Episode 14 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Truth And Consequences"
Episode 15 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Leader of the Whack"
Episode 16 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Burning at Both Ends"
Episode 17 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Missing Bone"
Episode 18 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Bully for Ethan"
Episode 19 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Lost & Found in Translation"
Episode 20 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "It'saMad Mad Mackerel"
Episode 21 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Copy That"
Episode 22 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Triassic Triumph"
Episode 23 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "A Star Is Torn"
Episode 24 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "A Ranger Exclusive"
Episode 25 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Tutenhawken's Curse"
Episode 26 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Disappearing Act"
Episode 27 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Fighting Spirit"
Episode 28 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Passion of Conner"
Episode 29 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Isn't It Lava-ly"
Episode 30 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Strange Relations"
Episode 31 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Thunder Storm, Part I"
Episode 32 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Thunder Storm, Part II"
Episode 33 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "In Your Dreams"
Episode 34 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Drawn into Danger"
Episode 35 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "House of Cards"
Episode 36 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "A Test of Trust"
Episode 37 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Thunder Struck, Part I"
Episode 38 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Thunder Struck, Part II"
Translated by Htet Linn Aung, Htet Nay Bala
Turbo - A